Joan Laporta: Barcelona Waxay Lumisay Hanaankii Khaaska Ahaa Ee Uu Johan Cruyff Na Baray. - Gool24.Net
Madax waynihii hore ee kooxda Barcelona ee Joan Laporta ayaa ku dooday in kooxdiisii hore ay lumisay hanaankii ciyaareed ee uu baray Johan Cruyff.
Johan Cruyff ayaa aas aas layaableh u dhigay kubbada cagta kooxihiisii hore ee Barcelona iyo Ajax kuwaas oo wali loo arko in ay ku raaxaysanayaan fikradii layaabka lahayd ee uu Johan Cruyff hirgaliyay.
Joan Laporta oo waqtigii Guardiola ee ay Barcelona aduunka qabsatay madax wayne ka ahaa Barcelona ayaa aaminsan in guuldaradii Barca ka soo gaadhay Liverpool iyo dhibaatada soo haysatay ay tahay in ay hanaankii Johan Gruyff badaleen.
Ernesto Valverde ayaa waqtiyo badan lagu soo eedaynayay in uu badalay hanaankii ciyaareed ee Barcelona balse guulihii uu kooxda ku soo hogaamiyay ayaa hoos u dhigay in uu cadaadis badan la soo kulmo ilaa intii laga soo gaadhay guuldaradii Champoins League ee Liverpool.
Joan Laporta ayaa soo qaatay halku dhiga caanka ah ee Barcelona ee “Mes que un Club’ oo la micno ah “Wax ka badan koox’ wuxuuna tilmaamay in aanu hal ku dhig kaliya ahayn balse uu ka micno wayn yahay.
Madax waynihii hore ee Barcelona ee Joan Laporta ayaa yidhi: “Hal ku dhig ma aha “Mes que un Club’ Wax ka badan koox- waa ku dhawaaqista sharciyo. Waxaanu leenahay tixraac kaas oo ahaa hanaankii khaaska ahaa ee uu anaga na baray Johan Cruyff”.
“Waxaanu sharad kula galnay akadamiyada, hadda kooxdu taas way ka dhaqaaqday” ayuu Joan Laporte u sheegay Sports isaga oo saluugsan hanaanka ciyaareed ee Barcelona.
Joan Laporta oo ka hadlayay sababta ay Barcelona hanaankeeda ciyaareed u ilaashan jirtay ayaa yidhi: “Waanu soo samaynay sababtoo ah waxay ahayd wixii aanu qaab ciyaareedka ku joogtaynay ee ku ciyaarista hanaan khaas ah oo kubbada cagta ah”.
“Waqtiga ayaa na cadeeyay in aanu saxsanayn, iyaga (Ciyaartoyda iyo tababarayaasha) ayaa farshaxanka dhabta ah u ahaa guushaas” ayuu Laporta hadalkiisa ku soo xidhay.
Tan iyo markii ay Xavi Hernandez iyo Ineiesta ka baxeen Camp Nou waxaa hoos u dhacday kubbad haysashadii iyo maamulkii ciyaarta ee Barca inkasta oo ayna taasi ka joojin in ay guulo badan soo gaadheen.